DHAGEYSO: Mid kamid ah Taliyayaashii watay ciidamada weeraray Xarunta baarlamaanka Puntland oo hadlay.
GAROOWE(P-TIMES) – Mid kamid ah taliyaashii ciidamada weeraray xarunta baarlamaanka Puntland oo la hadlay warbaahinta Garoowe ayaa sheegay in ay u tageen xarunta baarlamaanka, si ay u xaqiijiyeen xarunta baarlamaanka, wuxuuna ka gaabsaday waxay u tageen xaruntan oo ka jira.
Taliyaha ciidamada Booliska ee gobalka Nugaal ayaa sheegay in weerar ay ku bilaabeen ciidamada ilaalada xarunta, iyagoo la kulansan Taliyaha ammaanka ilaalada xarunta baarlamaanka, ma uusan sheegin wax faahfaahin.
Taliyaha qeybta Booliska ayaa ugu yeeray ciidamada Ilaalada xarunta Baarlamaanka in ay yihiin maleeshiyaad la garan waayay, taas oo muujinaysa ficilada ka dambeeyey dagaalkan.
Warar hordhac ah oo ka madax banaan sheegashada taliyaha qeybta Booliska ayaa sheegaya in ciidamada weerarkan qaaday ay iskugu jireen ciidamada gaarka ah ee Madaxtooyada, Daraawiishta & Booliska gobalka Nugaal.